နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > မဂ္ဂနီစီယမ်ပေးသွင်း Casting Die(24 များအတွက်စုစုပေါင်း မဂ္ဂနီစီယမ်ပေးသွင်း Casting Die ထုတ်ကုန်များ)
မဂ္ဂနီစီယမ်ပေးသွင်း Casting Die - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ကျနော်တို့တရုတ်ထံမှ မဂ္ဂနီစီယမ်ပေးသွင်း Casting Die ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း / စက်ရုံအထူးပြုနေကြသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားအဖြစ်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူလက်ကား မဂ္ဂနီစီယမ်ပေးသွင်း Casting Die / စျေးပေါ, တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်ဦးဆောင်သည့် မဂ္ဂနီစီယမ်ပေးသွင်း Casting Die များထဲမှ Ruizhun Precision Metal Co., Ltd. ။
tag ကို: laptop သတ္တု Frame က , မဂ္ဂနီစီယမ်ပေးသွင်း Casting Die , Ultrathin မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်း Computer ကို Frame က
အဆိုပါ Laptop ကိုသတ္တု Frame က Ultrathin မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းကွန်ပျူတာဘောင်, အမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်း panel ကိုလေယာဉ်ကိုယ်ထည်အစိုင်အခဲမျက်နှာပြင်ချောမွေ့နှင့်ကြော့စေသည်, အစွန်းထောင့်လုပ်ကိုင်ရန်လွယ်ကူသည်, ထိုအထူထက်ပို 0.3mm ဖြစ်ပါသည်,...
tag ကို: Semisolid သေကာစ်တင်ထုတ်ကုန်များ , မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်၏သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများ , Semisolid သတ္တုကာစ် Die
မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းသတ္တု၏စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအတွက်အပေါ့ပါးဆုံးသတ္တုတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ တူညီတဲ့အစွမ်းသတ္တိအစိတျအပိုငျးမြား၏အမှု၌, မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများပလပ်စတစ်ထက်ပိုမိုပါးလွှာပြီးပေါ့ပါးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာထုတ်ကုန်စျေးကွက်အတွက်အလင်း quantified...
tag ကို: Surface ကပက်ဖျန်းလုပ်ငန်းစဉ် , မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်း Computer ကို Frame က , မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းအပိုအစိတ်အပိုင်းများ
မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းမှတ်စုစာအုပ်ဘောင်, မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းလက်တွေ့သတ္တုအတွက်အပေါ့ပါးဆုံးသတ္တုဖြစ်ပြီး, အပြောင်းအလဲနဲ့အထူထက်ပို 0.3mm ဖြစ်ပါသည်...
tag ကို: ကုန်ပစ္စည်း Casting Die , မှို Casting semi-အစိုင်အခဲသေ , Cast ကို Components Die
tag ကို: အလင်းကိုသတ္တုသေကာစ် , သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များအတွက် Casting Die , မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်မှု
မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းစက်မှုဇုန်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်အပေါ့ပါးဆုံးသတ္တုတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ Semi-အစိုင်အခဲအပြောင်းအလဲနဲ့ပြီးနောက်, သတ္တုနံရံအထူ၏တိကျထက်ပို 0.3mm မှလုပ်ငန်းများ၌ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းထိတ်လန့်ခုခံ၏အထူး functions များ, ဆန့်ကျင် wear...
tag ကို: အီလက်ထရောနစ်ကုန်ပစ္စည်း Shell ကကာစ် Die , အိတ်ဆောင်အီလက်ထရောနစ်ကုန်ပစ္စည်းရှဲလ် , High Quality က Surface ကုသမှု
မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းမြင့်မားသောတိများနှင့်ကောင်းသောသေ-casting ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူလက်တွေ့ကျသောသတ္တုအတွက်အပေါ့ပါးဆုံးသတ္တုတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အီလက်ထရောနစ်ကုန်ပစ္စည်း Shell က Casting Die, Semi အစိုင်အခဲမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းထုတ်ကုန် ချ. သေဆုံး,...
tag ကို: မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းကွန်ပျူတာဆက်စပ်ပစ္စည်းများ , အလွိုင်းဖုန်စုပ်အစိတ်အပိုင်းများ Casting Die , Semisolid Laptop ကိုဆက်စပ်ပစ္စည်း Casting Die
လေဟာနယ် ချ. သေဖို့မဂ္ဂနီစီယမ် Shell ဆိုသည်မှာ Semisolid များအတွက်နည်းပညာ Casting Die Semi-အစိုင်အခဲသတ္တုရန်မြန်နှုန်းမြင့်နှင့်မဂ္ဂနီဆီယမ်နှင့်လူမီနီယံအလင်းအလွိုင်းပစ္စည်း High-ဖိအားဆေးထိုးတန်ဆာဖြစ်ပါတယ်။...
tag ကို: အမြင့်အဆုံး Post ကိုကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ် , Deluxe အသွေးအရောင်လုပ်ငန်းစဉ် , သတ္တုက Surface ဖုံးအလွှာ
မဂ္ဂနီစီယမ်သတ္တုစပ်မဂ္ဂနီဆီယမ်နှင့်အခြားဒြပ်စင်များပေါ်တွင်အခြေခံသတ္တုစပ်ဖြစ်ကြသည်။ ယင်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများသေးငယ်တဲ့သိပ်သည်းဆမြင့်မားတိကျတဲ့ခွန်အား elasticity ၏ကြီးမားသောကိန်းပကတိတန်ဖိုး,...
tag ကို: semi အမြဲတမ်းမှိုကာစ် , ၏ဖိအားသေကာစ် , အမြဲတမ်းမှို Casting အမျိုးအစားများ
tag ကို: မြင့်မားသောဖိအား Precision ကုန်ပစ္စည်းများ Casting Die , စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် Casting Die , မြင့်မားသောဖိအား Foundry Casting Die
တိကျစစ်ဘက်ဆိုင်ရာစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ Casting Die, မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းမြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုနှင့်အတူပေါ့ပါးဆုံးသတ္တုဖွဲ့စည်းပုံမှာပစ္စည်း, သေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းအရွယ်အစားနှင့်မြင့်မားသောတိစက်၏မြင့်မားသောတိကျသည်။...
tag ကို: ကာစ်တင်ဘို့အမြဲတမ်းမှို , ဖိအားကှယျလှနျသှား Casting Die , ကုန်ကျစရိတ်မော်ဒယ် Casting Die
tag ကို: စက်မှုအစိတ်အပိုင်းများမဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်း , သို့ကာစ်ကွန်ပျူတာအစိတ်အပိုင်းများ Die , သတ္တု Cast & Forge
မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်း Mg မှတ်စုစာအုပ်ကွန်ပျူတာ၏အခွံနီးပါးမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းအပေါငျးတို့သအားသာချက်များအပေါ်အခြေခံသည်အဖြစ်လက်ပ်တော့အစိတ်အပိုင်းများ, မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းများအသုံးပြုမှုများအတွက် Casting Die ။...
tag ကို: သို့ကာစ်စက်အစိတ်အပိုင်းများ Die , စက်မှုအစိတ်အပိုင်းများကာစ် Die , mg ဖိအားအစိတ်အပိုင်းများ Casting Die
မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းပန်းကန်နှင့်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါသေးငယ်တဲ့သိပ်သည်းဆမြင့်မားတိကျတဲ့ခွန်အားကောင်းသောလျှပ်စစ်သံလိုက်ဒိုင်းလွှား, လွယ်ကူသောအပြောင်းအလဲနဲ့, ကောင်းသော damping စွမ်းဆောင်ရည်၏အားသာချက်များရှိသည်။ ထိုသို့သောဒါအပေါ်ခေတ်သစ်အာကာသ,...
ultra-ထူးအိမ်သင်ဟာ့ဒ်ဝဲ Percision မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
OEM မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းအော်တိုများအတွက်အစိတ်အပိုင်းများ Casting Die အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တိကျစစ်ဘက်ဆိုင်ရာစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ Casting Die အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စိတ်ကြိုက်လျှပ်စစ်ပိုအပိုင်း OEM Mag ကာစ် Die အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းလက်ပ်တော့အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ Casting Die အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
OEM မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းစိတ်ကြိုက်အစိတ်အပိုင်းများ Designs Casting Die အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Wholesale မဂ္ဂနီစီယမ်ပေးသွင်း Casting Die from China, Need to find cheap မဂ္ဂနီစီယမ်ပေးသွင်း Casting Die as low price but leading manufacturers. Just find high-quality brands on မဂ္ဂနီစီယမ်ပေးသွင်း Casting Die produce factory, You can also feedback about what you want, start saving and explore our မဂ္ဂနီစီယမ်ပေးသွင်း Casting Die, We'll reply you in fastest.